सोच्दै नसोचेको कुरा झिकेर माधव नेपालले बखेडा झिके पछि प्रचण्ड र देउवा तीन छक्क ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
सोच्दै नसोचेको कुरा झिकेर माधव नेपालले बखेडा झिके पछि प्रचण्ड र देउवा तीन छक्क !
परमादेश बाट सरकार बनाएको गठबन्धनलाई यतिखेर परमादेश जारी गराएर केपी ओलीलाई सरकार बाट हटाउँन भन्दा गारो परेको छ मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्न ।
मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्न नसकेर सकसमा परेको सरकार माथी अनेक प्रश्न उठिरहेका बेला भर्खरै मात्रै नेकपा एमाले विभाजन गराएर नेकपा एसका अध्यक्ष बनेका माधव नेपालले बखेडा झिके पछि थप तनाव भएको खबर प्राप्त भएको छ ।
बालुवाटार स्रोतले दिएको सुचनाअनुसार नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो भागमा परेको भन्दा थप एक सिट बोनसमा मन्त्री मागेका छन् । यो सरकारनै मैले बनाएको हो भन्दै नेपालले एक सिट बढि त चाहियो चाहियो भन्दै अड्डी कसेका बताइन्छ ।
अहिले माधव नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा एसलाई ५ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री गरि जम्मा ६ जनालाई सरकारमा लैजाने भेनर गठबन्धनमा सहमती भएको थियो त्यसमा थप १ सिट माधव नेपालले मागेका छन् । माधव नेपालले सिट बढाउँन दवाव दिए पछि उपेन्द्र यादवले पनि नेकपा एसले पाए जती भाग पाउँनु पर्ने दावी गरेको बुझिएको छ ।
सरकार विस्तारबारे प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच आइतबार पनि भेटवार्ता भएको थियो ।
भेटमा अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीलाई मन्त्रालयको संख्या बढाउन माग गरेका थिए । उनले उपसभामुखसहित संसदीय समितिमा पनि भागबण्डा सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेपछि देउवा र प्रचण्ड आश्चर्यमा परेका थिए ।
स्रोतका अनुसार एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दिने पहिल्यै सहमति भइसकेको छ । अब माधव नेपालको पार्टीलाई थप एक मन्त्री दिने बताइएको छ । मन्त्री बन्न चाहनेको भिड कोटेश्वरमा बढेपछि माधव नेपाल निकै दबाबमा परेको बुझिएको छ ।
यस्तै, अवस्थामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि परेको छ । अब बन्ने चार मन्त्रीमा क–कसलाई पठाउने भन्ने प्रचण्डले निर्णय गर्नसमेत सकेका छैनन् ।